Asar TaLine (အစားတစ်လိုင်း): 2017
ဒီတစ်ပါတ်တော့ Seafood နဲ့ရခိုင်အစားအစာတွေကို တစ်နေရာထဲမှာ ဈေးသက်သာပြီး စုံလင်စွာ ရနိုင်တဲ့ Green House ဆိုတဲ့ဆိုင်ကို ခြေဆန့်ခဲ့ကြတယ်။ လူတော်တော်များများက Seafood လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ ဈေးကြီးတယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ Green House ကိုရောက်သွားတော့ အဲဒီ ထင်မြင်ချက်ဟာ တက်တက်စင်အောင်လွဲခဲ့တယ်။
ဂဏန်းကြီး ခုနှစ်ကောင် ရှစ်ကောင်လောက်ပါတဲ့ ဟင်းပွဲတစ်ပွဲကိုမှ ၇၀၀၀၊ ကင်းပုဇွန်ပါတဲ့ ပင်လယ်စာဟင်းပေါင်းကို ၇၀၀၀၊ ကျောက်ပုဇွန်ရခိုင်ချက်တစ်ပွဲကို ၇၀၀၀ ဆိုတော့ စွန်းတန်တာပေါ့ဗျာ။ ဂဏန်းတွေကလည်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ အကောင်ကြီးကြီး အသားပြည့်ပြည့်တွေပဲ။ ငါးသံပုရာ၊ ငါးဆားငံသီး၊ ပြည်ကြီးငါး နဲု့ ပင်လယ်စာတွေလည်းစုံစုံလင်လင် ရှိပါတယ်။ ထမင်းသုပ်၊ လက်ဖက်သုပ်၊ ဂျင်းသုပ်တို့ကို လည်း ၁၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ စားနိုင်ပါတယ်။ သောက်စရာအနေနဲ့ကတော့ အသီးဖျော်ရည်နဲ့ အအေးမျိုးစုံလည်း ရပါသေးတယ်ဗျ။
အရသာလည်းအလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အစားအသောက်တွေကလည်း သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်လှပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကလည်း ပြောစရာမလိုအောင် သဘောကောင်းကြတာ။
ဒီဆိုင်က တကယ်လတ်ဆတ်တဲ့ ဂဏန်း၊ ကျောက်ပုဇွန်၊ ပြည်ကြီးငါးစတဲ့ပင်လယ်တွေကို ရခိုင်ကနေ တိုက်ရိုက်မှာတယ်လို့သိရတယ်။ မြောက်ဥက္ကလာ မြို့နယ်အတွင်း (၁၀၀၀၀ ကျော်ဖိုး) ဆိုရင် Free Delivery ပို့ပေးသေးပါတယ်။ တခြားနေရာတွေ အတွက်တော့ ပို့ခပေးရပါမယ်။
ပုံလေးတွေအောက်မှာ ဈေးနှုန်းလေးတွေလည်း ထည့်ပေးထားတယ်နော့ ...
ဆိုင်လိပ်စာကတော့ မြောက်ဥက္ကလာပ ‘ဈ’ ဈေးအနီး မေဓါဝီလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိပါတယ်။
ဈေးလမ်းဆုံကနေဆိုရင် မေဓါဝီဆေးရုံဘက်ကို နည်းနည်းလောက်သွားလိုက်ရင်ရောက်ပါတယ်။
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် : မနက် ၇ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီ
Facebook : www.facebook.com/AsarTaLine
Instagram : www.instagram.com/asartaline
Website : www.asartaline.blogspot.com
Email : asartaline.foodreview@gmail.com
Amazing!!! တကယျတနျတဲ့ Seafood တှရေတဲ့ Green House
ဒီတဈပါတျတော့ Seafood နဲ့ရခိုငျအစားအစာတှကေို တဈနရောထဲမှာ စြေးသကျသာပွီး စုံလငျစှာ ရနျိုငျတဲ့ Green House ဆိုတဲ့ဆိုငျကို ခွဆေနျ့ခဲ့ကွတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက Seafood လို့ကွားလိုကျတာနဲ့ စြေးကွီးတယျလို့ ထငျတတျကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ Green House ကိုရောကျသှားတော့ အဲဒီ ထငျမွငျခကျြဟာ တကျတကျစငျအောငျလှဲခဲ့တယျ။
ဂဏနျးကွီး ခုနှဈကောငျ ရှဈကောငျလောကျပါတဲ့ ဟငျးပှဲတဈပှဲကိုမှ ၇၀၀၀၊ ကငျးပုဇှနျပါတဲ့ ပငျလယျစာဟငျးပေါငျးကို ၇၀၀၀၊ ကြောကျပုဇှနျရခိုငျခကျြတဈပှဲကို ၇၀၀၀ ဆိုတော့ စှနျးတနျတာပေါ့ဗြာ။ ဂဏနျးတှကေလညျး လတျလတျဆတျဆတျနဲ့ အကောငျကွီးကွီး အသားပွညျ့ပွညျ့တှပေဲ။ ငါးသံပုရာ၊ ငါးဆားငံသီး၊ ပွညျကွီးငါး နဲု့ ပငျလယျစာတှလေညျးစုံစုံလငျလငျ ရှိပါတယျ။ ထမငျးသုပျ၊ လကျဖကျသုပျ၊ ဂငျြးသုပျတို့ကို လညျး ၁၀၀၀ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ စားနိုငျပါတယျ။ သောကျစရာအနနေဲ့ကတော့ အသီးဖြျောရညျနဲ့ အအေးမြိုးစုံလညျး ရပါသေးတယျဗြ။
အရသာလညျးအလှနျကောငျးမှနျပွီး အစားအသောကျတှကေလညျး သနျ့ရှငျးလတျဆတျလှပါတယျ။ ဝနျဆောငျမှုကလညျး ပွောစရာမလိုအောငျ သဘောကောငျးကွတာ။
ဒီဆိုငျက တကယျလတျဆတျတဲ့ ဂဏနျး၊ ကြောကျပုဇှနျ၊ ပွညျကွီးငါးစတဲ့ပငျလယျတှကေို ရခိုငျကနေ တိုကျရိုကျမှာတယျလို့သိရတယျ။ မွောကျဥက်ကလာ မွို့နယျအတှငျး (၁၀၀၀၀ ကြျောဖိုး) ဆိုရငျ Free Delivery ပို့ပေးသေးပါတယျ။ တခွားနရောတှေ အတှကျတော့ ပို့ခပေးရပါမယျ။
ပုံလေးတှအေောကျမှာ စြေးနှုနျးလေးတှလေညျး ထညျ့ပေးထားတယျနော့ ..
ဆိုငျလိပျစာကတော့ မွောကျဥက်ကလာပ ‘စြ’ စြေးအနီး မဓေါဝီလမျးမကွီးပျေါမှာရှိပါတယျ။
စြေးလမျးဆုံကနဆေိုရငျ မဓေါဝီဆေးရုံဘကျကို နညျးနညျးလောကျသှားလိုကျရငျရောကျပါတယျ။
ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျ : မနကျ ၇ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီ
#AsarTaLine #အစားတဈလိုငျး #FoodReview #FoodLover #SeaFood #SpicyFood #ရခိုငျအစားအစာ #Delicous #Yummy #GreenHouse #Myanmar
Posted by AsarTaLine at 11:22 PM No comments:
စမ်းချောင်းက ဆိုင်ကောင်းေ​ကာင်း​​လေးေ​တွ ရေးပါဦး လို့
ပြောနေကြတဲ့ အစားတစ်လိုင်းတို့ အတွက် နာမည်ကြီး
အခုတလော စမ်းချောင်းမှာ ဆိုင်အသစ်တွေ အများကြီးဖွင့်လာတာ တွေ့ရတယ်...
ဒါပေမယ့် ဒီဆိုင်လေးကတော့ ဟိုးအရင်ကတည်းက စားကောင်းလို့ နာမည်ကြီး လူသိများပြီးသားလေးပေါ့…
အဲ့ဆိုင်မှာ အက်မင်တို့ကြိုက်တာတွေကတော့ ကွေ့တီယို၊ ယိုးဒယားသင်္ဘောသီးထောင်း၊ ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်၊ တို့ဟူးကြော်၊ ဘဲဥပေါင်း.. တခြားဟာတွေတော့ မစားကြည့်ရသေးဘူးရယ်။ ဒီဆိုင်လေးရဲ့ ကွေ့တီယို အရသာက ထိုင်းအရသာ ပူပူစပ်စပ်လေးနဲ့ စားလို့ကောင်းပြီး တို့ဟူးကြော်၊ ဘဲဥပေါင်း တို့က အချဉ်ရည်လေးနဲ့ တော်တော်လိုက်ဖက်တယ်…အက်မင်ကတော့ စားနေကြမဟုတ်လို့လားမသိ ဘဲဥပေါင်းကို အနည်းငယ်ငံတယ်လို့ထင်တယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကြိုက်ကြတယ်။ သောက်စရာအနေနဲ့ အသီးဖျော်ရည်တွေလည်း မျိုးစုံရပါတယ်...ပြီးတော့ ဒီဆိုင်လေးမှာ ဆန်ပြုတ်လည်းရသေးတယ်ဗျ...
ဆိုင်နာမည်က မစ္စတာထုံချိုင်း တဲ့…
အိမ်ဆိုင်လေးဆိုတော့ အပြင်အဆင်ကတော့ ဒီဇိုင်း ဘာညာ ကာလာ အနေအထား သိပ်မရျွိင်းထားဘူးဗျ..
ဒါပေမယ့် အရသာကတော့ ရှယ်ကောင်းတယ်… ညနေမှောင်ရီပျိုးရင် ခြင်လေးဆွဲတာတော့ ရှိတာပေါ့ဗျာ… :D :D
စမ်းချောင်း Spirit ဘေးလမ်း (ပဒုမ္မာလမ်း) ကနေဝင်ပြီး ချစ်တီးစားသောက်ဆိုင်ရှေ့ရောက်ရင် ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ လမ်းကြားလေး (မင်္ဂလာလမ်း) ထဲ ချိုးတာနဲ့ ညာဘက်မှာ တွေ့ရမယ်ခင်ဗျ… ;) မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ Simple ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးရှိတယ်...
အစားတစ်လိုင်းတို့ ထုံးစံအတိုင်း ပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီအောက်မှာလည်း ဈေးနှုန်း လေးတွေ ရေးပေးထားတယ်နော်… ;)
ဆိုင်လိပ်စာ - မစ္စတာထုံချိုင်းကွေ့တီယို၊ ပဒုမ္မာလမ်းမ၊ မင်္ဂလာလမ်းကြား၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် - မနက် (၉) - ည (၉)
စမျးခြောငျးထဲက နာမညျကွီး ကှတေီ့ယို
စမျးခြောငျးက ဆိုငျကောငျးကောငျးလေးတှေ ရေးပါဦး လို့
ပွောနကွေတဲ့ အစားတဈလိုငျးတို့ အတှကျ နာမညျကွီး
အခုတလော စမျးခြောငျးမှာ ဆိုငျအသဈတှေ အမြားကွီးဖှငျ့လာတာ တှရေ့တယျ...
ဒါပမေယျ့ ဒီဆိုငျလေးကတော့ ဟိုးအရငျကတညျးက စားကောငျးလို့ နာမညျကွီး လူသိမြားပွီးသားလေးပေါ့…
အဲ့ဆိုငျမှာ အကျမငျတို့ကွိုကျတာတှကေတော့ ကှတေီ့ယို၊ ယိုးဒယားသင်ျဘောသီးထောငျး၊ ကွကျခွထေောကျခဉျြစပျ၊ တို့ဟူးကွျော၊ ဘဲဥပေါငျး.. တခွားဟာတှတေော့ မစားကွညျ့ရသေးဘူးရယျ။ ဒီဆိုငျလေးရဲ့ ကှတေီ့ယို အရသာက ထိုငျးအရသာ ပူပူစပျစပျလေးနဲ့ စားလို့ကောငျးပွီး တို့ဟူးကွျော၊ ဘဲဥပေါငျး တို့က အခဉျြရညျလေးနဲ့ တျောတျောလိုကျဖကျတယျ…အကျမငျကတော့ စားနကွေမဟုတျလို့လားမသိ ဘဲဥပေါငျးကို အနညျးငယျငံတယျလို့ထငျတယျ၊ သူငယျခငျြးတှကေတော့ ကွိုကျကွတယျ။ သောကျစရာအနနေဲ့ အသီးဖြျောရညျတှလေညျး မြိုးစုံရပါတယျ...ပွီးတော့ ဒီဆိုငျလေးမှာ ဆနျပွုတျလညျးရသေးတယျဗြ...
ဆိုငျနာမညျက မစ်စတာထုံခြိုငျး တဲ့…
အိမျဆိုငျလေးဆိုတော့ အပွငျအဆငျကတော့ ဒီဇိုငျး ဘာညာ ကာလာ အနအေထား သိပျမရြှိငျးထားဘူးဗြ..
ဒါပမေယျ့ အရသာကတော့ ရှယျကောငျးတယျ… ညနမှေောငျရီပြိုးရငျ ခွငျလေးဆှဲတာတော့ ရှိတာပေါ့ဗြာ… :D :D
စမျးခြောငျး Spirit ဘေးလမျး (ပဒုမ်မာလမျး) ကနဝေငျပွီး ခဈြတီးစားသောကျဆိုငျရှရေ့ောကျရငျ ပထမဆုံးတှရေ့တဲ့ လမျးကွားလေး (မင်ျဂလာလမျး) ထဲ ခြိုးတာနဲ့ ညာဘကျမှာ တှရေ့မယျခငျဗြ… ;) မကျြနှာခငျြးဆိုငျမှာ Simple ဆိုတဲ့ ဆိုငျလေးရှိတယျ...
အစားတဈလိုငျးတို့ ထုံးစံအတိုငျး ပုံလေးတှေ တဈပုံခငျြးစီအောကျမှာလညျး စြေးနှုနျး လေးတှေ ရေးပေးထားတယျနျော… ;)
ဆိုငျလိပျစာ - မစ်စတာထုံခြိုငျးကှတေီ့ယို၊ ပဒုမ်မာလမျးမ၊ မင်ျဂလာလမျးကွား၊ စမျးခြောငျးမွို့နယျ၊ ရနျကုနျ။
ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျ - မနကျ (၉) - ည (၉)
#AsarTaLine #FoodReview #FoodLover #Foodie #Yummy #Delicious #Myanmar
#Tomyum #Noodle #Tofu #တုံယမ်း #ကွေ့တီယို #တို့ဟူး #စမ်းချောင်း
Posted by AsarTaLine at 2:56 AM No comments:
Shopping ထွက်ရင်း ဗိုက်ဆာတဲ့အခါ ဆွဲလို့ကောင်းတဲ့ ထိုင်းအရသာ Love Boat ခေါက်ဆွဲ
Thai Boat Noodle Beef ထိုင်းစတိုင်အမဲသားခေါက်ဆွဲ
ထိုင်းစတိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်း အရသာ စပ်စပ်ပြဲပြဲ အမဲခေါက်ဆွဲလေးပါ…
ပြီးတော့ သူက ဒီဆိုင်ရဲ့ Signature ခေါက်ဆွဲလေးလည်း ဖြစ်တာပေါ့...
အရသာက ကွေ့တီယိုလို ပုံစံမျိုးပါပဲ… သူ့ကို အမဲသားနဲ့တွဲဖက်စားရတာ
တကယ်ကို လိုက်ဖက်ပါတယ်… အရည်ရော၊ အဖတ်ရော နှစ်မျိုးစလုံး
စားလို့ရပြီး… ထိုင်ပင်စိမ်း အနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ မွှေးနေတာပဲဗျ… အမဲသား
အရသာကလည်း နူးညံ့ပြီး စားလို့ကောင်းတယ်၊ ဆန်စီး၊ ဆန်ပြား ကြိုက်တာ
ရွေးလို့ရတယ်၊ အက်မင်တော့ အပြားကြိုက်တော့ ခေါက်ဆွဲအပြားနဲ့စားဖြစ်တယ်…. ;)
Tom Yum Minced Pork Noodle
တုံယမ်းခေါက်ဆွဲ ကို ဝက်စဉ်းကောနဲ့ ဆိုတော့ တော်တေ်ာလေးကို စားကောင်းတယ်ဗျ...
အရသာကတော့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးနဲ့ အက်မင်ထိုင်းမှာစားခဲ့တဲ့ အရသာလေးအတိုင်းပါပဲ...
ဝက်သားလေးတွေကို နုတ်နုတ်စဉ်း ထားတော့ အသားက စားလိုက်တာနဲ့ ပျော်ဝင်သွား
တာမျိုးဗျာ… အစပ်ကြိုက်တဲ့ သူဆိုရင်တော့ အစပ်တွေထပ်ထည့်လို့ရအောင်
ချဉ် ငန် စပ် အနှစ်တွေကိုလည်း ချထားပေးပါတယ်...
Ice Green Tea လက်ဖက်ရည်စိမ်းအေး အချိုရည်လေးရဲ့ အရသာလေးက ချိုချိုစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ တော်တော်ကောင်းတယ်… အချိုသိပ် မကြိုက်ရင်တော့ အချိုလျော့ပေးမယ်ပြောပါတယ်...
Blue Ocean လေးကလည်း သောက်လိုက်တာနဲ့ ပင်လယ်ပြာလေးထဲရောက်သွားသလို ရင်ထဲကို အေးမြသွားတာများ So good ဗျာ… ;)
Tom Yum Pork Rib ၀က်နံရိုးတုံယမ်းခေါက်ဆွဲ
ငါးဖယ်လုံးလေးတွေရယ်၊ ၀က်နံရိုးလေးတွေရယ်၊ ကြက်ဥရယ်၊ ဖက်ထုပ်ကြော်လေးရယ်၊
ဆလတ်ရွက်လေးရယ်၊ ကြက်သွန်မိတ်ဖတ်လေးတွေရယ်၊ ကြက်သွန်ကြော်လေးတွေရယ်
နဲ့ စုံစုံလင်လင်လေး စားချင်စားဖွယ် ပြင်ဆင်ပေးထားတာဗျ… လျှာပေါ်တင် အရသာ
မခံစားရခင်မှာပဲ အပြင်အဆင်လေးနဲ့တင် သဘောကျနှစ်ခြိုက်မိတာ အမှန်ဗျာ… ဆန်စီးဖတ်လေးတွေကလည်း ပျော့ပျော့အိအိနဲ့ စားလို့ သိပ်ကိုကောင်းသလို၊
အရည်သောက်လေးကလည်း ချဉ်ပြုံးပြုံးလေးမို့ အတော်လေး ခံတွင်းလိုက်တယ်ဗျာ… ;)
အက်မင်စားဖူးသမျှ တုံယမ်းခေါက်ဆွဲတွေထဲမှာ ဒီအရသာလေးကိုတော့ အတော်လေး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ဖြစ်ရပါတယ်...
အချိုရည်ထဲမှာဆိုရင် ထူးထူးခြားခြား Lovely Punch လေးမှာသောက်ဖြစ်တယ်…
ချယ်ရီသီးအရသာလေးကို Soda လေးနဲ့ တွဲဖက်ဖျော်စပ်ထားတာက
အမောလည်းပြေသလို၊ ခံတွင်းရှင်းပြီး စိတ်ကြည်လင်
=>> ဆိုင်ကြော်ငြာလုပ်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ… အက်မင်တို့
ကိုယ့်ဟာကိုယ် စားသောက်ခဲ့ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်၍
အစားအသောက်ချစ်သူ အစားတစ်လိုင်းတို့ကို အညွှန်းရေးကာ ဝေမျှပေးခြင်းသာ !!!
ဆိုင်လိပ်စာ - Tamwe Ocean Super Center, Ground Floor.
ဆိုင်ခွဲ - Pyay Road , City Mart (ရှင်စောပုလမ်း)
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် - 9:00AM to 9:00PM
Shopping ထှကျရငျး ဗိုကျဆာတဲ့အခါ ဆှဲလို့ကောငျးတဲ့ ထိုငျးအရသာ Love Boat ခေါကျဆှဲ
Thai Boat Noodle Beef ထိုငျးစတိုငျအမဲသားခေါကျဆှဲ
ထိုငျးစတိုငျဆိုတဲ့အတိုငျး အရသာ စပျစပျပွဲပွဲ အမဲခေါကျဆှဲလေးပါ…
ပွီးတော့ သူက ဒီဆိုငျရဲ့ Signature ခေါကျဆှဲလေးလညျး ဖွဈတာပေါ့...
အရသာက ကှတေီ့ယိုလို ပုံစံမြိုးပါပဲ… သူ့ကို အမဲသားနဲ့တှဲဖကျစားရတာ
တကယျကို လိုကျဖကျပါတယျ… အရညျရော၊ အဖတျရော နှဈမြိုးစလုံး
စားလို့ရပွီး… ထိုငျပငျစိမျး အနံ့သငျးသငျးလေးနဲ့ မှေးနတောပဲဗြ… အမဲသား
အရသာကလညျး နူးညံ့ပွီး စားလို့ကောငျးတယျ၊ ဆနျစီး၊ ဆနျပွား ကွိုကျတာ
ရှေးလို့ရတယျ၊ အကျမငျတော့ အပွားကွိုကျတော့ ခေါကျဆှဲအပွားနဲ့စားဖွဈတယျ…. ;)
တုံယမျးခေါကျဆှဲ ကို ဝကျစဉျးကောနဲ့ ဆိုတော့ တျောတျောလေးကို စားကောငျးတယျဗြ...
အရသာကတော့ ခဉျြခဉျြစပျစပျလေးနဲ့ အကျမငျထိုငျးမှာစားခဲ့တဲ့ အရသာလေးအတိုငျးပါပဲ...
ဝကျသားလေးတှကေို နုတျနုတျစဉျး ထားတော့ အသားက စားလိုကျတာနဲ့ ပြျောဝငျသှား
တာမြိုးဗြာ… အစပျကွိုကျတဲ့ သူဆိုရငျတော့ အစပျတှထေပျထညျ့လို့ရအောငျ
ခဉျြ ငနျ စပျ အနှဈတှကေိုလညျး ခထြားပေးပါတယျ...
Ice Green Tea လကျဖကျရညျစိမျးအေး အခြိုရညျလေးရဲ့ အရသာလေးက ခြိုခြိုစိမျ့စိမျ့လေးနဲ့ တျောတျောကောငျးတယျ… အခြိုသိပျ မကွိုကျရငျတော့ အခြိုလြော့ပေးမယျပွောပါတယျ...
Blue Ocean လေးကလညျး သောကျလိုကျတာနဲ့ ပငျလယျပွာလေးထဲရောကျသှားသလို ရငျထဲကို အေးမွသှားတာမြား So good ဗြာ… ;)
Tom Yum Pork Rib ၀ကျနံရိုးတုံယမျးခေါကျဆှဲ
ငါးဖယျလုံးလေးတှရေယျ၊ ၀ကျနံရိုးလေးတှရေယျ၊ ကွကျဥရယျ၊ ဖကျထုပျကွျောလေးရယျ၊
ဆလတျရှကျလေးရယျ၊ ကွကျသှနျမိတျဖတျလေးတှရေယျ၊ ကွကျသှနျကွျောလေးတှရေယျ
နဲ့ စုံစုံလငျလငျလေး စားခငျြစားဖှယျ ပွငျဆငျပေးထားတာဗြ… လြှာပျေါတငျ အရသာ
မခံစားရခငျမှာပဲ အပွငျအဆငျလေးနဲ့တငျ သဘောကနြှဈခွိုကျမိတာ အမှနျဗြာ… ဆနျစီးဖတျလေးတှကေလညျး ပြော့ပြော့အိအိနဲ့ စားလို့ သိပျကိုကောငျးသလို၊
အရညျသောကျလေးကလညျး ခဉျြပွုံးပွုံးလေးမို့ အတျောလေး ခံတှငျးလိုကျတယျဗြာ… ;)
အကျမငျစားဖူးသမြှ တုံယမျးခေါကျဆှဲတှထေဲမှာ ဒီအရသာလေးကိုတော့ အတျောလေး နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျဖွဈရပါတယျ...
အခြိုရညျထဲမှာဆိုရငျ ထူးထူးခွားခွား Lovely Punch လေးမှာသောကျဖွဈတယျ…
ခယျြရီသီးအရသာလေးကို Soda လေးနဲ့ တှဲဖကျဖြျောစပျထားတာက
အမောလညျးပွသေလို၊ ခံတှငျးရှငျးပွီး စိတျကွညျလငျ
=>> ဆိုငျကွျောငွာလုပျပေးခွငျးမဟုတျပါ… အကျမငျတို့
ကိုယျ့ဟာကိုယျ စားသောကျခဲ့ပွီး ကွိုကျနှဈသကျ၍
အစားအသောကျခဈြသူ အစားတဈလိုငျးတို့ကို အညှနျးရေးကာ ဝမြှေပေးခွငျးသာ !!!
ဆိုငျလိပျစာ - Tamwe Ocean Super Center, Ground Floor.
ဆိုငျခှဲ - Pyay Road , City Mart (ရှငျစောပုလမျး)
ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျ - 9:00AM to 9:00PM
#LoveBoat #OceanShweGoneDaing #Tomyum #Noodle #Pork #Beef #အစားတဈလိုငျး #တုံယမျး #ခေါကျဆှဲ #၀ကျသား #အမဲသား #၀ကျနံရိုး #ကှတေီ့ယို
Posted by AsarTaLine at 2:58 AM No comments:
Junction Mawtin က Ramen Monster ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေး
ဆောင်းဝင်လာပြီဆိုတော့ ခေါက်ဆွဲ ပူပူစပ်စပ်လေးတွေ စားလို့ရတဲ့
ဂျပန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်လေး အကြောင်းပြောပြမယ်နော် …
Junction Mawtin က Ramen Monster ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။
တချို့က ဒီဆိုင်ကို သိကြပေမယ့် သူ့ဆီက စားလို့ကောင်းတဲ့ အစားအသောက်တွေ အကြောင်းတော့ အသိနည်းကြတယ်။
အဓိက ညွှန်းချင်တာကတော့ ပူပူစပ်စပ် လေးနဲ့ အရသာထူးခြားတဲ့ Spicy Ramen ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် Ramen လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ချိုချိုဆိမ့်ဆိမ့် ဂျပန်ခေါက်ဆွဲ အရသာမျိုးလို့ ထင်ထားတာ။ အခု Spicy Ramen ကတော့ ခေါက်ဆွဲသားနူးညံ့ပြီး အရည်ရောအဖတ်ရောစားလို့ရတယ်၊ ပူပူစပ်စပ်အရသာ ရှိလို့ လူတိုင်းအကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
နောက်ထပ်ဟင်းပွဲတစ်ခု Katsu Don လေးကတော့ ထမင်းကို ကြက်ဥပေါင်းနှင့် ရောထားပြီး ကြက်သားကြော် လေးနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးရတာပါ။ ကြက်သားကို မုန့်အနှစ်နဲ့ အကြွပ်ကြော် ထားတော့ တမူထူးခြားနေတာပေါ့နော်…
Kimchi Nabe Udon ကတော့ ခေါက်ဆွဲလုံး ကြီးကြီးကို Seafood၊ အသားလုံး၊ မှိုအစုံအလင်နဲ့ တော်တော် အရသာရှိလှတယ်ဗျ ။ Seafood မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ကြက်သားနဲ့လည်း မှာစားလို့ရပါတယ်။
Gyoza လို့ခေါ်တဲ့ ဝက်သားဖက်ထုပ်ကြော် ဆိုတာလေးလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ထူးခြားတာက ဖက်ထုပ်ကြော်ကို ဘယ်အအေးနဲ့မဆို တွဲဖက်စားဖို့ အတွက် 1200 ပဲပေးရမှာပါ။ Chashu (ဝက်သားပြားပေါင်း) ကတော့ နူးနူးအိအိ လေးနဲ့ စားလို့ ကောင်းတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ချစ်စရာ Marshmallow လေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Home-made ရေခဲမုန့်လေးတွေ ကတော့ အက်မင်တို့ အကြိုက်ပေါ့။
ဒီဆိုင်ကို အစားတစ်လိုင်းက သိရတာလို့ပြောရင် Discount ပေးဦးမှာနော် 😍 😍
Special Menu (Spicy Ramen, Tonkatsu Ramen, Negi Ramen) တို့ အတွက် 10% Discount ရမှာပါ…
Ramen Monster ရဲ့ အစဉ်အလာမပျက် Ramen Challenge ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။
Ramen ပွဲကြီးတစ်ပွဲကို မိနစ်နှစ်ဆယ် အတွင်း ကုန်အောင် စားနိုင်မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ကြိမ်စားသုံးခွင့် ၈၅၀၀ တန် Cupon တစ်စောင်ကို ရရှိမှာနော်..။
အခုဆိုရင် မြန်မာပလာဇာ Food City မှာလည်း ဆိုင်ခွဲအသစ်ရောက်ရှိ​​​နေပာပြီနော်…
ဆိုင်လိပ်စာ - Junction Mawtin မြေညီထပ် (KFC ဘေး)
ဆိုင်ခွဲများ - Hledan Center ၊ Myanmar Plaza
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် - 10:30AM – 9:00AM
ဆောငျးဝငျလာပွီဆိုတော့ ခေါကျဆှဲ ပူပူစပျစပျလေးတှေ စားလို့ရတဲ့
ဂပြနျခေါကျဆှဲဆိုငျလေး အကွောငျးပွောပွမယျနျော …
Junction Mawtin က Ramen Monster ဆိုတဲ့ ဆိုငျလေးပါ။
တခြို့က ဒီဆိုငျကို သိကွပမေယျ့ သူ့ဆီက စားလို့ကောငျးတဲ့ အစားအသောကျတှအေကွောငျးတော့ အသိနညျးကွတယျ..
အဓိက ညှနျးခငျြတာကတော့ ပူပူစပျစပျ လေးနဲ့ အရသာထူးခွားတဲ့ Spicy Ramen ပဲဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျဆိုရငျ Ramen လို့ပွောလိုကျတာနဲ့ ခြိုခြိုဆိမျ့ဆိမျ့ ဂပြနျခေါကျဆှဲ အရသာမြိုးလို့ ထငျထားတာ။ အခု Spicy Ramen ကတော့ ခေါကျဆှဲသားနူးညံ့ပွီး အရညျရောအဖတျရောစားလို့ရတယျ၊ ပူပူစပျစပျအရသာ ရှိလို့ လူတိုငျးအကွိုကျတှစေ့မှောပါ..
နောကျထပျဟငျးပှဲတဈခု Katsu Don လေးကတော့ ထမငျးကို ကွကျဥပေါငျးနှငျ့ ရောထားပွီး ကွကျသားကွျော လေးနဲ့ တှဲဖကျစားသုံးရတာပါ။ ကွကျသားကို မုနျ့အနှဈနဲ့ အကွှပျကွျော ထားတော့ တမူထူးခွားနတောပေါ့နျော…
Kimchi Nabe Udon ကတော့ ခေါကျဆှဲလုံး ကွီးကွီးကို Seafood၊ အသားလုံး၊ မှိုအစုံအလငျနဲ့ တျောတျော အရသာရှိလှတယျဗြ ။ Seafood မကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျ ကွကျသားနဲ့လညျး မှာစားလို့ရပါတယျ။
Gyoza လို့ချေါတဲ့ ဝကျသားဖကျထုပျကွျော ဆိုတာလေးလညျး ရှိပါသေးတယျ။ ထူးခွားတာက ဖကျထုပျကွျောကို ဘယျအအေးနဲ့မဆို တှဲဖကျစားဖို့ အတှကျ 1200 ပဲပေးရမှာပါ.. Chashu (ဝကျသားပွားပေါငျး) ကတော့ နူးနူးအိအိ လေးနဲ့ စားလို့ ကောငျးတယျ..
နောကျပွီးတော့ ခဈြစရာ Marshmallow လေးတှနေဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ Home-made ရခေဲမုနျ့လေးတှေ ကတော့ အကျမငျတို့ အကွိုကျပေါ့။
ဒီဆိုငျကို အစားတဈလိုငျးက သိရတာလို့ပွောရငျ Discount ပေးဦးမှာနျော 😍 😍
Special Menu (Spicy Ramen, Tonkatsu Ramen, Negi Ramen) အတှကျ 10% Discount ရမှာပါ…
Ramen Monster ရဲ့ အစဉျအလာမပကျြ Ramen Challenge ဆိုတာလညျးရှိပါသေးတယျ။
Ramen ပှဲကွီးတဈပှဲကို မိနဈနှဈဆယျ အတှငျး ကုနျအောငျ စားနျိုငျမယျဆိုရငျ နောကျတဈကွိမျစားသုံးခှငျ့ ၈၅၀၀ တနျ Cupon တဈစောငျကို ရရှိမှာနျော..
အခုဆိုရငျ မွနျမာပလာဇာ Food City မှာလညျး ဆိုငျခှဲအသဈရောကျရှိပါပွီနျော…
ဆိုငျလိပျစာ - Junction Mawtin မွညေီထပျ (KFC ဘေး)
ဆိုငျခှဲမြား - Hledan Center ၊ Myanmar Plaza
ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျ - 10:30AM – 9:00AM
#AsarTaLine #FoodReview #FoodLover #Foodie #Yummy #Delicious #JunctionMawtin #Myanmar #Ramen #Noodle #Spicy #Kimchi #အစားတစ်လိုင်း #ဂျပန် #ခေါက်ဆွဲ #ချဉ်စပ်
Posted by AsarTaLine at 3:05 AM No comments:
၀က်သားတုတ်ထိုးမလား? ကြာဇံကြော်လေးစားမလား… ကိုကြီးကိုသွား :D
အသီးမှာ သရက်၊ အသားမှာ ၀က်ဆိုသလို… ၀က်သားမကြိုက်လှသူက
ခပ်များများထင်ပါတယ်… ဒီလိုပဲ ၀က်သားတုတ်ထိုးဆိုရင် အသည်းစွဲခိုက်တဲ့
ကိုကို၊မမတို့လည်း များလှမယ်ထင်မိဗျ… ;)
ဒီတော့ အက်မင်တို့က အကြိုက်တူသူတွေကို ညွှန်းချင်တာက
ဒီရက်ပိုင်း စားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရေလည်မိုက်တဲ့ ၀က်သားနဲ့ကြာဇံဆိုင်လေး
အကြောင်း ပြောပြဦးမယ် အစားတစ်လိုင်းတို့ရေ…
ဆိုင်နာမည်က ကိုကြီးတဲ့… ဆိုင်အပြင်အဆင်က တခမ်းတနားကြီး
မဟုတ်ပေမယ့် အရသာနဲ့ စေတနာကတော့ တကယ်လက်ဖျားခါတယ်…
ကိုကြီးဆီမှာ… ကြာဇံတို့၊ ၀က်သားတို့အပြင်၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ကော်ပြန့်ကြော်၊
ကော်ပြန့်စိမ်းတို့နဲ့ ဘဲဥပေါင်းဆိုပြီး စားချင်စရာတွေ အစုံရတယ်…
အဲ့တော့ အက်မင်တို့လည်း ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲကျဆိုသလို
ကိုကြီးဆီမှာ., ဆာဆာနဲ့ တီးဖြစ်လိုက်ကြတယ်… :D
၀က်သားအစုံတစ်ပွဲမှာလိုက်တာ အတော်လေးများတယ်… အရသာကလည်း
ပုံမှန်တုတ်ထိုးတွေထက်ကိုကောင်းတယ်ဗျာ… တကယ့်ကို ရှလွတ်ဖွယ်ပဲ… :P
ကော်ပြန့်မှာဆိုရင် အစိမ်းနဲ့အကြော် (၂)မျိုးရတယ်… အကြော်က
ကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးနဲ့ တစ်မျိုး အရသာရှိသလို… အစိမ်းကလည်း
ပျော့ပျော့အိအိလေးနဲ့ စားကောင်းပြန်ရောဗျ… ;)
ဥဆိုရင် လာထားဆိုတဲ့ ဥကြိုက်သူတွေအတွက်ကတော့
ဘဲဥပေါင်းတစ်လုံးမှ ၃၀၀ဆိုတော့ ၂လုံးလောက် မှာလိုက်ရင်ကို
ကြာဇံကြော်တို့၊ ခေါက်ဆွဲကြော်တို့ကို အသီးအရွက်လေးနဲ့
ငရုပ်သီးမှုန့်လေးနဲ့ ရောပြီး စားလိုက်တာ ရှယ်ပဲဗျာ…
အရည်သောက်အနေနဲ့ ဟင်းချိုရည်လေးကလည်း ကျောက်ဖရုံသီးကို
တရုတ်နံနံလေးနဲ့ ချက်ထားတာမို့ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဆိုပဲဗျ… ;)
ဆိုတော့ဗျာ… အစားကို ၀၀နဲ့ အကြိုက်စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ကိုကြီးဆီသာ သွားလိုက်ပါတော့… သွားလိုက်ပါတော့ဗျာ… ;) :D :P :-)
ပုံအောက်က Caption လေးတွေဖတ်ရင်း သားရေယိုသွားကြဦးနော့် ;)
စားမှာပဲ၊ ၀ါးမှာပဲဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း mention ခေါ်လိုက်ပါဦးလို့… :D
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် - နေ့ခင်း 12:30 မှ ည 8:30 အထိ
ဆိုင်လိပ်စာ - အမှတ် - ၁၄၂၊ ၃၇ လမ်း၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းထိပ်၊ ရန်ကုန်
ဖုန်းနံပါတ် - 09-5100532, 09-795100532
၀ကျသားတုတျထိုးမလား? ကွာဇံကွျောလေးစားမလား… ကိုကွီးကိုသှား :D
အသီးမှာ သရကျ၊ အသားမှာ ၀ကျဆိုသလို… ၀ကျသားမကွိုကျလှသူက
ခပျမြားမြားထငျပါတယျ… ဒီလိုပဲ ၀ကျသားတုတျထိုးဆိုရငျ အသညျးစှဲခိုကျတဲ့
ကိုကို၊မမတို့လညျး မြားလှမယျထငျမိဗြ… ;)
ဒီတော့ အကျမငျတို့က အကွိုကျတူသူတှကေို ညှနျးခငျြတာက
ဒီရကျပိုငျး စားဖွဈခဲ့တဲ့ ရလေညျမိုကျတဲ့ ၀ကျသားနဲ့ကွာဇံဆိုငျလေး
အကွောငျး ပွောပွဦးမယျ အစားတဈလိုငျးတို့ရေ…
ဆိုငျနာမညျက ကိုကွီးတဲ့… ဆိုငျအပွငျအဆငျက တခမျးတနားကွီး
မဟုတျပမေယျ့ အရသာနဲ့ စတေနာကတော့ တကယျလကျဖြားခါတယျ…
ကိုကွီးဆီမှာ… ကွာဇံတို့၊ ၀ကျသားတို့အပွငျ၊ ခေါကျဆှဲ၊ ကျောပွနျ့ကွျော၊
ကျောပွနျ့စိမျးတို့နဲ့ ဘဲဥပေါငျးဆိုပွီး စားခငျြစရာတှေ အစုံရတယျ…
အဲ့တော့ အကျမငျတို့လညျး ရငေတျတုနျး ရတှေငျးထဲကဆြိုသလို
ကိုကွီးဆီမှာ., ဆာဆာနဲ့ တီးဖွဈလိုကျကွတယျ… :D
၀ကျသားအစုံတဈပှဲမှာလိုကျတာ အတျောလေးမြားတယျ… အရသာကလညျး
ပုံမှနျတုတျထိုးတှထေကျကိုကောငျးတယျဗြာ… တကယျ့ကို ရှလှတျဖှယျပဲ… :P
ကျောပွနျ့မှာဆိုရငျ အစိမျးနဲ့အကွျော (၂)မြိုးရတယျ… အကွျောက
ကြှတျကြှတျရှရှလေးနဲ့ တဈမြိုး အရသာရှိသလို… အစိမျးကလညျး
ပြော့ပြော့အိအိလေးနဲ့ စားကောငျးပွနျရောဗြ… ;)
ဥဆိုရငျ လာထားဆိုတဲ့ ဥကွိုကျသူတှအေတှကျကတော့
ဘဲဥပေါငျးတဈလုံးမှ ၃၀၀ဆိုတော့ ၂လုံးလောကျ မှာလိုကျရငျကို
ကွာဇံကွျောတို့၊ ခေါကျဆှဲကွျောတို့ကို အသီးအရှကျလေးနဲ့
ငရုပျသီးမှုနျ့လေးနဲ့ ရောပွီး စားလိုကျတာ ရှယျပဲဗြာ…
အရညျသောကျအနနေဲ့ ဟငျးခြိုရညျလေးကလညျး ကြောကျဖရုံသီးကို
ပူစီနံလေးနဲ့ ခကျြထားတာမို့ ကနျြးမာရေးအတှကျလညျးကောငျးတယျဆိုပဲဗြ… ;)
ဆိုတော့ဗြာ… အစားကို ၀၀နဲ့ အကွိုကျစားခငျြတယျဆိုရငျတော့
ကိုကွီးဆီသာ သှားလိုကျပါတော့… သှားလိုကျပါတော့ဗြာ… ;) :D :P :-)
ပုံအောကျက Caption လေးတှဖေတျရငျး သားရယေိုသှားကွဦးနေျာ့ ;)
စားမှာပဲ၊ ၀ါးမှာပဲဆိုတဲ့ သူငယျခငျြးတှကေိုလညျး mention ချေါလိုကျပါဦးလို့… :D
Opening hour : 12:30 PM - 8:30 PM
ဆိုငျလိပျစာ - အမှတျ(142)၊ (37)လမျး၊ မဟာဗန်ဓုလလမျးထိပျ၊ ပနျးဆိုးတနျး။
ဖုနျးနံပါတျ - 09-5100532, 09-795100532
#Vermicelli #Noodle #PorkStick #PanRoll #အစားတဈလိုငျး #ကျောပွနျ့ #၀ကျသား #ခေါကျဆှဲ #ကွာဇံ #ပနျးဆိုးတနျး
Posted by AsarTaLine at 3:06 AM No comments:
၀က်သားတုတ်ထိုးမလား? ကြာဇံကြော်လေးစားမလား… ကိုကြီးက...